Fanojo (voalaza fa very) : Vidin-kiraro tsy voaloa 45.000Ar no nampitsoaka azy
Tsenan’i Mahamasina : niverina tsikelikely
Niverina tsikelikely nandray ny asany isan’alakamisy ireo mpivarotra eny amin’ny tsena Mahamasina
MPANAKANTO Nampian’ny Ministeran’ny kolontsaina
Tsy ireo marefo ara-pivelomana irery fa saika misedra ny fahasahiranana ateraky ny fihibohana avokoa ny isan-tokantrano amin’izao. Ho an’ireo mpanakanto manokana izay ahitana ny mpihira,
Masoivoho Frantsay : Hisy sidina roa haka ireo frantsay tsy tafody
Hisy sidina manokana hiainga avy eto Antananarivo ho any Parisy ny alakamisy 23 aprily izao. Sidina nalefan'ny Air France ary niainga avy ao La Réunion izy ity.
Niantoka kiraro fa tsy nahalafo izany no nahatonga an’i Fanojo, 15 taona nitsoaka. «Tsy nanampo azy izay ho velona intsony aho». Io no tenin’ny reniny raha nanontaniana raha nilaza momban’i Fanojo.
Nitebiteby, nitady azy ny fianakaviana
Tsy hita nanomboka ny alatsinainy 18 febroary hariva sahabo tamin’ny 5ora sy sasany ity mpianatra ity, ary mbola nilalao basikety izy no nilaozan’ireo namany. Niparitaka tamin’ny tambazotran-tserasera sy ny haino aman-jery sasany izany izay nilaza fa “mitaintaina mafy izahay fianakaviany”, hoy ny zokiny, Sévina. Velon-tebiteby ny ray aman-dreniny sy ny iray tampoho aminy nandritra izany, efa nikaroka tamin’ireo namany sy havany ary olom-pantany teto Antananarivo Renivohitra. Tonga hatrany amin’ny tranom-paty mihitsy aza, ary nifandray tsy tapaka tamin’ny mpitandro filaminana sy ny mpampahalala vaovao.
Nisy nahita teny Ankazobe
Ny ampitso tolakandron’io, ny 19 febroary, naharay antso ireo fianakaviana fa tsikaritry ny mponina mirenireny any Ankazobe ilay zazalahy tsy hita teto Andrenivohitra. Tamin’io ihany, nandray fiara nihazo ny Renivohitr’i Vonizongo ireo ray aman-dreniny. Raha vantany vao tonga tany izy, niantso ny mpanao gazetinay, mbola sempotra : “Misaotra amin’ny fifampitam-baovao, tamin’ny tambazotram-piarahamonina, indrindra niara-nizaka taminay ny tebiteby tamin’ny fitadiavana ilay zaza, vao mahatazana azy mihitsy aho izao fa rahampitso ianao antsoiko”. Izany no tenin’ny reniny tamin’izany izay mbola tao anaty ranomasom-pifaliana.
Raha ny tafa farany nifanaovana tamin’ny antso an-tariby afak’omaly, nilaza ireo ray aman-dreniny fa resaka kiraron’ny namany tsy lafo no nampandositra ilay zazalahy. “Niantoka kiraron’ilay namany izy izay mitentina 45.000 Ariary, kinanjo tsy mety lafony izany nefa ireo namany tsy manaiky fa vola no nifanarahana fa tsy misy entana miverina izany. Noho ny tahotra ireto namany sy ny tsy fahasahiany nilaza izany taminay, hany heriny, lasa izy nitsoaka. Ankazobe no noheveriny fa lavitra tsy ahitana azy. Nataony saran-dalana izay hany mba tahiriny, tsy azony an-tsaina velively ny ho sakafony sy ny trano fonenana”. Araka ny tenin’ny reniny hatrany.
Tsy mety mianatra
Noho ny tahotra ireo namany, mbola tsy mety mianatra i Fanojo, efa nanatona ny manam-pahefana eo an-toerana, ao amin’ny fokontany iray misy azy ireo amin’ny faritry ny Distrika faha-dimy eto Andrenivohitra ny ray aman-dreniny ary nametraka fitarainana sy hampanao raharaham-pihavanana handravonana ny raharaha. Efa lany mihoatra ny vidin’ireo kiraro ireo ray aman-dreny nitadiavana ity tovolahy ity.